R/wasaare Khayre”Dhismaha Xabsiga Dhexe ee Baydhabo waa qeyb kamid ah qorshe horumarinta Cadaaladad iyo Amniga | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA R/wasaare Khayre”Dhismaha Xabsiga Dhexe ee Baydhabo waa qeyb kamid ah qorshe horumarinta...
R/wasaare Khayre”Dhismaha Xabsiga Dhexe ee Baydhabo waa qeyb kamid ah qorshe horumarinta Cadaaladad iyo Amniga
Muqdisho(SONNA)Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre, oo ay weheliyaan Wasiirro ka tirsan Xukuumadda, Xildhibaano iyo Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadam ayaa maalintii shalay waxaa uu dhagax-dhigay xabsiga dhexe ee Baydhabo oo laga dhisayo duleedka magaalada.
Talaabadani ayuu ku tilmaamay raiisul Wasaraah Soomaaliya in ay tahay mid ay qeyb ka tahay qorshe Dowladda Soomaaliya ay ku horumarinayso Cadaaladda iyo guud ahaan sugidda amniga Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sidoo kale booqasho ku soo maray goobta laga dhisayo Xabsigan oo noqon doona midka ugu weyn deegaanada Koonfur Galbeed.
Wasiirka Caddaaladda Soomaaliya ayaa ugu horrayntii ka war bixiyey ahmiyadda uu dhismahan cusub ee xabsigu u leeyahay bulshada koonfur galbeed,isagoo xusay in uu yahay mid u muhiimsan shacbka deegaanadaasi.
“Xabsigan cusub wuxuu meesha ka saarayaa baahidii loo qabay xabsi dhexe oo deegaanku yeesho. Waxaan rajeynayaa in marka uu dhamaado dhismaha xabsigan uu buuxin doono baahidii deegaanku u qabay. Iyadoo tani ay qeyb ka noqonayso qorshaha dawladda ee kor loogu qaadayo caddaaladda iyo amniga dalka.” Ayuu yiri R/Wasaare Khayre.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay inuu uga mahadcelinayo cid walba oo gacan ku siineysa sidii dalka oo dhan looga hirgelin lahaa mashaariic horumarineed oo lagama maarmaan u ah nolosha bulshada Soomaaliyeed.
Ra’iisul Wasaaraha Khayre ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho, kadib, booqasho labo maalin ah oo ku joogay magaalada Baydhabo.
Wuxuuna intii uu halkaasi ku sugnaa kulamo kala duwan la yeeshay, Madaxda Koonfur galbeed, Odayaasha dhaqanka, Bulshada rayidka iyo Ciidamadda Xoogga dalka iyo AMISOM oo dhammaantood ay isla soo qaadeen horumarinta iyo xoreynta deegaanada Koonfur Galbeed.
Previous articleDowladda Ruwanda oo balanqaad muhiim ah sameysay
Next articleJubblanad oo xooga saareysa waxbarashada caruurta ka soo laabatay Qoxootiga Kenya